भक्तपुर अस्पतालमा ६ शय्याको आईसीयू उद्घाटन – indepth.com.np
भक्तपुर अस्पतालमा ६ शय्याको आईसीयू उद्घाटन
२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार १९:१७
भक्तपुर अस्पतालमा सञ्चालित आईसीयू कक्षको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल । तस्बिर : इन डेप्थ
भक्तपुर । सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि भक्तपुर अस्पतालस्थित आईसीयू कक्ष उद्घाटन गरिएको छ । अस्पतालले भाद्र १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ६ शय्याको आईसीयू बिहीबार एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले रिबन काटेर आईसीयू कक्षको उद्घाटन गरे । त्यस्तै अस्पतालमा परीक्षण सञ्चालन गरिएको पीसीआर मेसिनको समेत बिहीबार नै उद्घाटन गरिएको छ ।
कार्तिक २३ गतेदेखि परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिएको पीसीआर मेसिनको उद्घाटनसँगै बिहीबारदेखि विधिवत कोरोना भाइरस संक्रमण जाँच सुरु गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दुलालले उद्घाटन गरेको आईसीयूमा छ वटै भेन्टिेलेटर रहेका छन् ।
सरकारले भक्तपुर अस्पताललाई भक्तपुर जिल्लाको लागि कोभिड हब अस्पताल बनाएको थियो । सोहीअनुसार अस्पतालले भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको थियो । आईसीयू सञ्चालनअघि अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितलाई लक्षित गरी आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
आईसीयू कक्ष उद्घाटन गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री दुलालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दा भक्तपुर अस्पताल बागमती प्रदेशमै उत्कृष्ट हुन सफल भएको जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुको आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिँदै आएको र सोहीअनुसार भक्तपुर अस्पतालले आफूलाई अब्बल सावित गरेको स्पष्ट पारे ।
अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतमले भेन्टिलेटरसहित ६ शय्याको आईसीयू कक्षसँगै अस्पतालले २० शय्याको हाइकेयर युनिटसमेत तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिइन् ।
आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तर आईसीयू अभावको अवस्थामा हाइकेयर युनिटमा राखेर पनि उपचार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘हाइकेयर युनिट सञ्चालन गर्न सरकारले जनशक्ति उपलब्ध गराउने भनेका छ’, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतमले भनिन्, ‘जनशक्ति प्राप्त हुनासाथ सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने तयारी अवस्थामा हाइकेयर युनिट राखेका छौं ।’
उनले आईसीयू सञ्चालनमा ल्याएदेखि हालसम्म ६० जना बिरामीको उपचार गरिएको जानकारी दिइन् । अहिले पनि आईसीयूमा बिरामीले भरिएको छ ।
जिल्लाकै एकमात्र सरकारी अस्पताल कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा केन्द्रित भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरु मारमा पर्दै आएका थिए । तर त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न अस्पतालले विस्तारित सेवा (ईएचएस), पेइङ क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतमले बताइन् ।
‘विस्तारित सेवामा उपलब्ध नहुने अन्य स्वास्थ्य सेवाको लागि अग्रीम पेइङ क्लिनिक पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं’, उनले भनिन्, ‘यसले जिल्लाका बिरामीहरुले महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा धाउनुपर्ने छैन ।’
Related Topics:Bhaktapur HospitalFeaturedHealth
भक्तपुरमा कोरोनाको कारण ९४ जनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमणको कारण भक्तपुरमा ७८ जनाको मृत्यु